पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्बिर सार्वजनिक, के हो ब्ल्याक होल ? - सुनाखरी न्युज
पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्बिर सार्वजनिक, के हो ब्ल्याक होल ?
Posted on: April 11, 2019 - 7:40 pm
काठमाडौँ — वैज्ञानिकहरुले ब्ल्याक होल (कृष्ण छिद्र) को तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् । पृथ्वीभन्दा ५ करोड ५० लाख प्रकाश वर्ष टाढा रहेको एम–८७ तारापुञ्ज (ग्यालेक्सी) मा रहेको ब्ल्याक होलको पहिलो तस्बिर वैज्ञानिकहरुले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
खगोलशास्त्रीहरुले इभेन्ट होरिजन टेलिस्कोप (ईएचटी) को मद्दतबाट यसको तस्बिर लिन सफल भएका हुन्। इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप विश्वका विभिन्न ८ वटा टेलिस्कोपहरुको एउटा नेटवर्क हो। एस्ट्रो फिजिक्स जर्नल लेटरमा प्रकाशित रिर्पोट अनुसार विश्वका विभिन्न २० मुलुकका ५९ वटा संस्थाका दुई सय जना वैज्ञानिकहरु यस कार्यमा संलग्न थिए। जसको उद्देश्य एउटै थियो( ब्ल्याक होलको इभेन्ट होरिजनको तस्बिर लिने।
यो ब्ल्याक होल सूर्य भन्दा ६ अर्ब ५० करोड गुणा ठूलो छ। यसलाई ब्रहमाण्डको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गह्रौ र ठूलो ब्ल्याक होल हो। तस्बिर केही अनियमित जस्तो देखिएपनि चम्किलो रिङ आकार भने प्रष्ट देखिएको छ। ब्ल्याक होलबाट प्रकाश समेत उम्कन पाउँदैन। वैज्ञानिकहरुले सार्वजनिक गरेको तस्बिर ब्ल्याक होलेको छाँया हो। ब्ल्याक होलको वास्तिवक तस्बिर खिच्न सम्भव नै छैन किनभने यसबाट प्रकाश उम्कन पाउँदैनन्।
इभेन्ट होरिजनलाई प्वाइन्ट अफ नो रिर्टन पनि भनिन्छ जहाँ कुनै पनि वस्तु पुगेपछि बाहिर आउन सक्दैनन्। यो ब्ल्याक होलको वरिपरि रहेको एउटा काल्पिनक सतह हो जसलाई वैज्ञानिकहरुले गणितीय हिसाबका आधारमा प्रमाणित गरको छन्।